China thermoforming muchina fekitari uye bhizimisi Boya
Vacuum Sealer Bhegi uye maRoll
Vacuum ganda muchina
Seimwe yeinotungamira gadzira inoshanduka pasuru muChina, Boya haangokupa iwe yekumonera zvinhu asiwo neyekuchenesa yekupakata muchina.
Iva mutengesi wemapakeji akaunganidzwa mhinduro, isu tinotarisa kwete chete kune inivhesitimendi uye yekushandisa mutengo wevatengi vedu, asi zvakare pane akakwana mapakeji mhedzisiro.
Tinogona kukupa iwe wakasiyana-siyana wekutakura muchina wakakodzera kumarudzi ese ekuputira zvinhu, senge thermoforming vheji yekupakata muchina, yemuchina yekupakata muchina, vharuvhu (inflatable) yekupakata muchina, ganda vharuvhu kuputira muchina, isina mvura yekupakata muchina, kupisa shrink muchina, Bhokisi mhando mweya wemhepo kurongedza .
Iyi otomatiki inoramba ichiwedzera thermoforming yekupakata muchina ine akasiyana maficha ekunyorera nyama zvigadzirwa, soya zvigadzirwa, manoodles, hove dzegungwa, michero, miriwo, pickles, mushonga, Hardware, ect yekutsvaira kana inflatable kurongedza.
●Photoelectric yekutevera, inogona kushandisa kara yekuvhara firimu kana yakajeka firimu yekurongedza kudzikisa mutengo uye nekuvandudza chigadzirwa chikamu.
●Iko kushandiswa kweakasanganiswa muforoma, nyore kutsiva, uye iyo fosi ine kutonhora system
●Corner chinyorwa chinodzokorodza system kuchengetedza zvakatipoteredza hutsanana
●Yepamberi yekucheka-kucheka, kutsemura system, komputa yekugadzirisa banga.
Boya's thermoforming yekupakata muchina ine robust isina muviri ine mukana wekugara .Sezvo otomatiki inoenderera chimiro inoonekwawo neakakwira mwero wekuita.
Nemakore makumi maviri ane ruzivo injinjiniya, Boya anopa mhinduro inodhura kwazvo zvese zvemidziyo uye zvinhu zvemutengi wedu zvichibva mukushandisa kwavo uye nezvinodiwa. Kuti uve nechokwadi chekuvimbika, kuberekwazve uye kushanda zviri nyore kune wese mutengi. Imwe yeayo ega ega akagadzirwa neakanyanya kuburitsa uye nekushandisa kwakanyanya kwenzvimbo inowanikwa.
Tinogona kuona kuti isu tinowirirana nemachina kune ekurongedza zvinhu uye kuti kudyidzana pakati pemuchina, chigadzirwa, kurongedza zvinhu uye kurongedza mhepo inogara ichitariswa.
Zvekutakura zvinhu zvinoenderana nemuchina uyu ndapota tarisa firimu rekugadzira uye risiri-rekuumba.
KuBoya tine boka revanhu rakaomarara, rakaringana mudhipatimendi redu reQC, apo odha yega yega painotanga kugadzirwa mabhegi ekutanga mazana maviri anokandwa mumarara nekuti anoshandiswa kugadzirisa muchina. Kune aya mabhegi chisimbiso ndicho chakanyanya kukosha chavanotarisa. Ipapo mamwe ma1000 mabhegi ivo vanozoedza nguva dzose kutaridzika uye basa kuti vaone kuti iri kufamba mushe .Ipapo vamwe vakasara kuburitsa QC inozotarisa zvisati zvaitika. Mushure mekupedzisa odha vanochengeta sampuro kune rimwe nerimwe batch apo vatengi vedu vakagamuchira zvinhu kana vaine chero mibvunzo mhinduro kwatiri isu tinogona kuteedzera zvakajeka kuti tiwane dambudziko uye tiwane mhinduro yekuona kuti hazvizomboitika futi.
Tine basa rakaringana rekubvunza:
Yekutanga yekutengesa sevhisi, Yekushandisa Bvunza, Yehunyanzvi Bvunza, Package Bvunza, Shipment Bvunza, Mushure mekutengesa sevhisi.
Isu takatanga kugadzirwa kwevhisi sealer bhegi uye mabhanzi kubvira 2002, ane makore anopfuura makumi maviri ruzivo kukupa iwe hupfumi uye zvemhando yepamusoro zvigadzirwa.
Vacuum homwe chimwe chinopisa kutengesa chigadzirwa chine pagore chinzvimbo che 5000tons.
Kunze kweaya echinyakare zvakagadzirwa zvigadzirwa Boya zvakare zvinokupa iwe izere yakazara inochinjika mapakeji zvinhu senge yekuumba uye isiri-yekuumba flim, lidding firimu, shrink bhegi uye mafirimu, VFFS, HFFS.
Chigadzirwa chitsva cheganda firimu ratove bvunzo rakabudirira rinozove rekugadzirwa kwakawanda munaKurume 2021, Yako kubvunza inogamuchirwa!
Svika pakuziva isu
Pashure: Kupisa kupisa muchina
Zvadaro: Vacuum imba muchina
Otomatiki Vacuum Kurongedza Machine
Chamber Vacuum Kurongedza Machine
Yekutengesa Packaging Machine
Chikafu Packaging Machine
Chikafu Sealing Vacuum Kurongedza Machine
Vacuum imba muchina
Kupisa kupisa muchina
Beitou Industrial Park, nhamba 10 Keji Avenue, Yixing City, Jiangsu Province
Runhare: +86 18261589258